Hofori Kumukira Chiito
Mitambo & Nhetembo Podcast
Kutanga kweE3 2021 !!! nhau
Atlantis: Chakavanzika cheGuta Rakarasika Mitambo nhetembo
3D Dot Game Magamba Mitambo nhetembo
Beacons Hisshou Gaku: Gedhi mukati Mitambo nhetembo
Makorori Vanodzivirira Mitambo nhetembo
Mugari Evil 3: Nemesis Mitambo nhetembo
The Valiant - Epic hondo dzakaiswa muMiddle Ages Zvidobi
Posted on 14. May 2022 17. May 2022 By Claudia Wendt	No Comments kuGiants Uprising
Giants Uprising inoita kuti utize kubva muhusungwa sehofori. Varsav Game Studios yakauya nechiratidziro chechiitiko.
1 kutsiva pavanhu
1.1 keel balsa
1.2 Tamba sehofori muGiants Uprising
1.3 Vatumwa veChimurenga
1.4 Mhedziso paGiants Uprising
Chinangwa chako sehofori ishaya pavanhu. Vakaisa hofori muuranda uye sehofori unotsiva. Munotsika-tsika, munopwanya uye munopwanya tuduku tunotiza. Unoparadza zvose zvinomira panzira yako.
Shamwari yako pamushandirapamwe wako wekutsiva ndiKielbalsa. Anokuratidza pokutera kukutsamwa kwako nechishuvo chako chokutsiva. Unoda rusununguko rwerudzi rwako uye woenda kunotsvaga hama dzako dziri muuranda. Munokuchidzira kumukirana kwevarefu.
Tamba sehofori muGiants Uprising
Iwe wakasimuka sehofori uye unotsiva zvakakufanira. Kutya nokuvhunduka zvinokuperekedza munzira yako. Sehofori huru, unotora rusununguko. Iwe unosangana nenyaya yemanzwiro evanhu vaviri vakadzingwa. Rogbar naKiebalsa vanoda kutsiva kutsiva kwavo sewe.
Muri nhume dzokumukira vanhu. Hondo dzinounza matambudziko kwauri. Nezvombo zvekare unoenda kunorwa nevanhu nemauto avo. Kuparadza kunokuperekedza iwe paunoparadza misha yevanhu pasi.
Mhedziso paGiants Uprising
Giants Uprising haisi yevasina moyo. Kuno kune ropa uye kuzere nekuparadza. Mutambo uyu unoperekedzwa nenyaya inonakidza. Hofori dzehukuru hwakakura dzaive dzakaderera pane vanhu uye dzava kuda rusununguko rwavo. Izvi zvinoreva pamusoro pese kuparadza kwaunouya nako. Munoparadza shongwe, maguta nemisha. Iwe uchabaya, kutsika, uye kubhadharisa dash kuti ubate vavengi vako. Unogonawo kurwisa mamwe mahofori. Chero zvazvingava, mutambo wacho une zvakawanda zvingaita uye tinogona kutarisira. Mutambo parizvino uchiri muEarly Access.
Ramba uchienda Nyaya pamusoro peVarsav Studios
Izvozvi zvinoenda Varsav Studios webhusaiti
Previous Post: Mabhesi Akarodzwa 4
Next Post: Hard West 2: Kuburitswa 2022
Century: Zera remadota Action
Aigina no Yogen - Kubva Iyo Ngano yeBalubalouk Action
Battle Formula Action
Aegis Vadziviriri Action
8 Maziso Action
Your kero e havazobvumirwi ichibudiswa. Raida minda anozivikanwa ne * yakatarwa
Iyi webhusaiti inoshandisa Akismet kudzikisa spam. Dzidza zvimwe nezve maitiro ako ekutaurisa data.
Vashandi Nhasi: 95
Vashandisi Nezuro: 140
Total maonero: 75607
Powered By WPS Yevashanyi Counter
Yakakurudzira nzvimbo dzemitambo (5)
Mitambo nhetembo (1.378)
Mitambo yebhodhi (8)
Yakarasika Mitambo Kona (2)
Svetuka & Mhanya (1)
mitambo yemimhanzi (1)
Novel yekuona (4)
Mutambi wemutambo (80)
Chirongwa chemutambo (98)
Deactivation yaitwa! Kushanya kwako kune ino webhusaiti hakucharekodhwa newebhu ongororo. Ndokumbira utarise kuti iyo Matomo deactivation cookie pane ino webhusaiti ichadzimwawo kana ukabvisa makuki akachengetwa mubrowser yako. Zvakare, kana ukashandisa imwe komputa kana webhu browser, unozofanirwa kuenda nenzira yekubuda zvakare.
Iwe une sarudzo yekudzivirira zviito zvaunotora pano kubva kuongororwa uye kubatana. Izvi zvinodzivirira kuvanzika kwako, asi zvakare zvichadzivirira muridzi kubva pakudzidza kubva pane zvaunoita uye kugadzirisa usability iwe nevamwe vashandisi.
Kushanya kwako pawebhusaiti iyi parizvino kuri kunyorwa neveMatomo web analysis. Rega kusarudza bhokisi iri kuti ubude. Kushanya kwako pawebhusaiti ino parizvino hakuna kunyorwa neveMatomo webhu ongororo. Shandisa bhokisi rekutarisa rino kuti usarudze kupinda.
Iyo yekutevera yekubuda-basa inoda activated makuki.
Uri kutsvaga mutambo here?
Spellforce Kukunda kweEo
Yakazara Hondo Warhammer
Ace Mheni Mitambo nhetembo
Trine Mitambo nhetembo
Kutiza Kwekushanya: Haunted Hunt Mitambo nhetembo
Guerrilla Games Mutambi wemutambo
Iyo Yakadzika Entanglement - Iyo Adventures yeBertram Fiddle Mitambo nhetembo
sefungu Mitambo nhetembo
Splitgate: Beta Season 2 Update Mitambo nhetembo
Mega Munhu V Mitambo nhetembo
Copyright © 2022 Mitambo uye Nhetembo.
dzinofambiswa ne PressBook News Rima theme
Iyi webhusaiti inoshandisa makuki kunatsiridza ruzivo rwevashandisi. Unogona kudzima makuki apa.
Iyi webhusaiti inoshandisa makiki kuti uvandudze ruzivo rwako. Tichafunga kuti wakanaka neichi, asi unogona kusarudza kana uchida. Marongero eKukiBvuma / GAMUCHIRA
Kuvanzika uye macookie masystem
Ruzivo nezve makuki / zvakavanzika kutarisisa
Iyi webhusaiti inoshandisa makuki kuvandudza mashandiro uye ruzivo rwemushandisi. Kune marudzi maviri emakuki: Iwo anodiwa anochengetwa mubrowser uye akakosha pakushanda chaiko kwewebhusaiti. Iwo asina kufanira kana echitatu-bato makuki anoshandiswa anoshandiswa pakuongorora uye anotiratidza mashandisiro ewebhusaiti ino. Aya makuki anochengetwawo mubrowser, asi chete kana iwe uchibvumira pachena. Mune zvinotevera, iwe une sarudzo yekurambidza aya echitatu-bato makuki. Kudzima makuki aya kunogona kukanganisa maitiro ewebhusaiti.
anoshanda nguva dzose
AWSALBCORS 7 mazuva Iyi cookie inotungamirirwa neAmazon Web Services uye inoshandiswa pakuyera kuyera.
mutengi_id 10 makore Iyi cookie inoshandiswa kupaza ruzivo rwechokwadi.
cookielawinfo-cheki-bhokisi 1 gore Yakaiswa neGDPR Cookie Consent plugin, iyi cookie inoshandiswa kurekodha mvumo yemushandisi yemakuki muchikamu che "Advertisement".
cookielawinfo-checkbox-analytics 1 gore Yakaiswa neGDPR Cookie Consent plugin, iyi cookie inoshandiswa kurekodha mvumo yemushandisi yemakuki muchikamu che "Analytics".
cookielawinfo-cheki bhokisi-rinoshanda 1 gore Iyo cookie inotarwa neGDPR Cookie Consent plugin kurekodha mvumo yemushandisi yemakuki ari muchikamu "Inoshanda".
cookielawinfo-chebhokisi-Zvakakodzera 1 gore Yakaiswa neGDPR Cookie Consent plugin, iyi cookie inoshandiswa kurekodha mvumo yemushandisi yemakuki muchikamu che "Zvinodikanwa".
cookielawinfo-cheki-isina-rinodiwa 1 gore Yakagadzikwa neGDPR Cookie Consent plugin, iyi cookie inoshandiswa kurekodha mvumo yemushandisi yemakuki muchikamu che "Zvisina basa".
cookielawinfo-checkbox-vamwe 1 gore Yakaiswa neGDPR Cookie Consent plugin, iyi cookie inoshandiswa kuchengetedza mvumo yemushandisi yemakuki muchikamu "Vamwe".
cookielawinfo-checkbox-performance 1 gore Yakaiswa neGDPR Cookie Consent plugin, iyi cookie inoshandiswa kuchengetedza mvumo yemushandisi yemakuki muchikamu "Performance".
CookieLawInfoConsent 1 gore Inorekodha iyo default bhatani mamiriro eiyo inoenderana chikamu & chimiro cheCCPA. Inoshanda chete mukubatana neyokutanga cookie.
ezCMPCCS 1 gore Ezoic inoseta iyi cookie kuti itarise kana mushandisi abvuma kune nhamba makuki.
Ese makuki asina kudiwa zvakananga kuti webhusaiti ishande nemazvo uye anoshandiswa kuunganidza ega data remushandisi kuburikidza nekuongorora, kushambadza, kana zvimwe zvakadzimirirwa zvemukati anonzi makuki asina basa. Izvo zvakakosha kuti uwane mvumo yemushandisi makiki aya asati ashandiswa. Kana chibvumirano chekushandiswa kwekiki chisina kupihwa, hachizoshandiswe uye chete makiki anodiwa ndiwo achange achishanda.
__qca 1 gore 26 mazuva The __qca cookie ine chekuita ne Quantcast Iyi data isingazivikanwe inotibatsira kunzwisisa zvirinani zvinodiwa nevashandisi uye kugadzirisa webhusaiti zvinoenderana.
euds chiitiko Iyi cookie inoiswa neRocket Fuel yekushambadzira kwakanangwa kuitira kuti vashandisi vaonekwe ads akakodzera.
i 10 makore Cookie iyi inotarwa neOpenX kurekodha data remushandisi risingazivikanwe, senge IP kero, nzvimbo yenzvimbo, mawebhusaiti akashanyirwa, ads akadzvanywa nemushandisi nezvimwe, kuitira kushambadzira kwakakodzera.
mc 1 gore 1 mwedzi Quanserve inoseta iyo mc cookie kuti itevedzere isingazivikanwe maitiro evashandisi pawebhusaiti.
rud 1 gore 24 mazuva Rud cookie ndeyeRocketfuel uye inonyoresa data remushandisi, senge IP kero, nzvimbo, nezvimwe nechinangwa chekugonesa ad kuratidzwa.
ruds chiitiko Cookie iyi ndeyaRocketfuel uye inounganidza asingazivikanwe data remushandisi kunanga vateereri uye kuendesa kushambadzira kwemunhu.
yt-kure-kwakabatana-zvishandiso haana YouTube inoseta kuki iyi kuti ichengetedze vhidhiyo yezvinodiwa nemushandisi vachishandisa yakamisikidzwa YouTube vhidhiyo.
yt-kure-mudziyo-id haana YouTube inoseta kuki iyi kuti ichengetedze vhidhiyo yezvinodiwa nemushandisi vachishandisa yakamisikidzwa YouTube vhidhiyo.
yt.innertube::nextId haana Cookie iyi, yakagadzwa neYouTube, inonyoresa ID yakasarudzika yekuchengetedza data pane mavhidhiyo kubva kuYouTube akaonekwa nemushandisi.
yt.innertube::zvikumbiro haana Cookie iyi, yakagadzwa neYouTube, inonyoresa ID yakasarudzika yekuchengetedza data pane mavhidhiyo kubva kuYouTube akaonekwa nemushandisi.
Makiki anoshanda anoshandiswa kugonesa mamwe mabasa akadai sekugovana ruzivo pamaforamu enhau, kuunganidza mhinduro uye mamwe mabasa echitatu.
__cf_bm 30 kwemaminitsi Iyi cookie, yakaiswa Cloudflare, inoshandiswa kutsigira Cloudflare Bot Management.
pll_language 1 gore Iyo pll _language cookie inoshandiswa naPolylang kurangarira mutauro wakasarudzwa nemushandisi paanodzokera kuwebhusaiti, uye zvakare kuwana ruzivo rwemutauro kana rusipo neimwe nzira.
Performance analysis makuki anoshandiswa kuongorora uye kunzwisisa zvakakosha zvekuita. Izvi zvinobatsira kuenderera mberi nekuvandudza webhusaiti uye nekudaro kupa vashanyi ruzivo rwakanaka rwemushandisi.
AWSALB 7 mazuva AWSALB ndeye application load balancer cookie yakagadzwa neAmazon Web Services kumepu chikamu kune chinangwa.
ezds 7 makore Ezds cookie inotarwa nemupi Ezoic, uye inoshandiswa kuchengetedza saizi yepixel yebrowser yemushandisi, kugadzirisa ruzivo rwemushandisi uye kuona kuti zvirimo zvinokwana.
ezoab_1034 2 maawa Ezoic inoshandisa iyi cookie kupatsanura bvunzo dzakasiyana maficha uye kushanda.
nezvimwehw 7 makore Iyo ezohw cookie inotarwa nemupi Ezoic, uye inoshandiswa kuchengetedza saizi yepixel yebrowser yemushandisi, kugadzirisa ruzivo rwemushandisi uye kuona kuti zvirimo zvinokwana.
ymex 1 gore Yandex inoseta iyi cookie kuti iunganidze ruzivo nezve maitiro emushandisi pawebhusaiti. Ruzivo urwu runoshandiswa pakuongorora webhusaiti uye nekugadzirisa webhusaiti.
yuidss 1 gore Yandex inochengeta kuki iyi mubrowser yemushandisi kuti ione muenzi.
Analytical makuki anoshandiswa kunzwisisa kuti vashanyi vanodyidzana sei neiyi webhusaiti. Aya makuki anobatsira kuwana ruzivo nezve nhamba yevashanyi, bounce rate (nhamba yevashanyi vanoshanyira webhusaiti vobva vangoisiya), nyika yemushanyi, nezvimwe.
__gadhi 1 gore 24 mazuva Iko __gads cookie, yakagadzwa neGoogle, inochengetwa pasi peDoubleClick domain uye inoronda nhamba yenguva dzinoonekwa nevashandisi kushambadza, inoyera budiriro yemushandirapamwe uye kuverenga mari yainotambira. Cookie iyi inogona kuverengwa kubva kudura rayakasetwa uye haizoteveri chero data paunenge uchitsvaga mune mamwe masaiti.
_gu 1 mwedzi Iyi cookie inoiswa nemupi Getsitecontrol. Iyi cookie inoshandiswa kusiyanisa vashandisi.
_ym_d 1 gore Yandex inogadza iyi cookie kuchengetedza zuva revashandisi yekutanga saiti chikamu.
_ym_isad 20 maawa Yandex inoseta iyi cookie kuti ione kana muenzi ane ad blockers.
_ym_uid 1 gore Yandex inogadza iyi cookie kuti ione vashandisi vesaiti.
KUTENDA 2 makore YouTube inoseta kuki iyi kuburikidza neYouTube-mavhidhiyo akaiswa uye inonyoresa isingazivikanwe data data.
eu 1 gore 24 mazuva Cookie iyi ndeyaRocketfuel uye inounganidza asingazivikanwe data remushandisi kunanga vateereri uye kuendesa kushambadzira kwemunhu.
ezvev 1 zuva Iyi cookie inotarwa nemupi Ezoic kuti atarise mapeji aonekwa nemushandisi.
ezoadgid_1034 30 kwemaminitsi Ezoic inoshandisa kuki iyi kurekodha id yezera remushandisi uye chikamu chechikadzi.
ezoref_1034 2 maawa Ezoic inoshandisa kuki iyi kuchengetedza dura rekutaura, kureva webhusaiti iyo mushandisi anga ari, asati auya kune webhusaiti iripo.
ezouspva chiitiko Iyo ezouspva cookie inotarwa nemupi Ezoic uye inoshandiswa kuteedzera nhamba yemapeji aishanyirwa nemushandisi nguva dzese.
akadonbo chiitiko Iyo ezouspvv cookie inotarwa nemupi Ezoic uye inoshandiswa kuteedzera nhamba yemapeji akashanyirwa nemushandisi nguva dzese.
UserID1 3 mwedzi Makuki aya akaiswa neADITION Technologies AG, seID yakasarudzika uye isingazivikanwe yemushanyi wewebhusaiti, kuziva vashandisi vakasiyana pazvikamu zvakawanda.
yabs-sid chiitiko Yandex inoseta kuki iyi kuchengetedza iyo ID yechikamu.
yandexuid 1 gore Yandex inogadza iyi cookie kuti ione vashandisi vesaiti.
Kushambadzira makuki anoshandiswa kuratidza vashanyi kushambadzira kwakakodzera uye mishandirapamwe yekushambadzira. Aya makuki anoteedzera vashanyi pavanenge vachishanyira webhusaiti uye vanotora ruzivo rwunovabvumira kuti vashandise zviziviso zvakagadzirirwa.
Mamwe makuki asina kukamurwa anosanganisira ayo akaongororwa asi asati apihwa chikamu.
_auid 1 gore Hapana tsananguro inowanikwa.
active_template::332619 2 mazuva
appRelease chiitiko Hapana tsananguro inowanikwa.
BACKENDID chiitiko Hapana tsananguro inowanikwa.
dspid 1 gore Hapana tsananguro inowanikwa.
ezoab_332619 2 maawa Hapana tsananguro
ezoadgid_332619 30 kwemaminitsi Hapana tsananguro
ezopvc_332619 30 kwemaminitsi Hapana tsananguro
ezoref_332619 2 maawa Hapana tsananguro
ezosuibasgeneris-1 1 gore Hapana tsananguro
ezovid_332619 30 kwemaminitsi Hapana tsananguro
ezovuuid_332619 30 kwemaminitsi Hapana tsananguro
ezovuuidtime_332619 2 mazuva Hapana tsananguro
ezux_lpl_332619 1 gore Hapana tsananguro
f_001 3 mwedzi Hapana tsananguro
g_001 1 zuva Hapana tsananguro
gt_auto_switch 1 mwedzi Hapana tsananguro inowanikwa.
lp_332619 30 kwemaminitsi Hapana tsananguro
mts_id Makore mana 9 mwedzi 10 mazuva Hapana tsananguro inowanikwa.
mts_id_last_sync Makore mana 9 mwedzi 10 mazuva Hapana tsananguro inowanikwa.
pvc_visits 1 gore Iyi cookie inogadzirwa nepost-views-counter. Iri cookie rinoshandiswa kuverenga nhamba dzekushanyirwa panzvimbo.Inobatsirawo kudzivirira kuona kudzokororwa kwechinyorwa nemuenzi.
srp chiitiko Hapana tsananguro inowanikwa.
userId 5 mwedzi 27 mazuva Hapana tsananguro
Makuki anodikanwa akakosha kuti webhusaiti iite nemazvo. Ichi chikamu chinongova nemakuki anogonesa ekutanga mashandiro uye mabasa ekuchengetedza ewebhusaiti. Aya makuki haachengete chero data remunhu.